Intlama, inoveli yokugqibela uBukowski asinike yona | Uncwadi lwangoku
Wamkelekile abafundi! Namhlanje sizisa uphononongo lwencwadi yokugqibela epapashwe ngongasekhoyo uCharles Bukowski. Lo mbhali wayengomnye wee-greats, okanye ubuncinci akazange ashiye nabani na ongenamdla. Nokuba uyayithanda okanye uyayithiya.
Kule meko, kwabo bamthandayo, ngekhe asishiyele umsebenzi ongcono ngaphambi kokuba ahambe. Ngendlela yakhe ekhethekileyo, emdaka, ekrwada kwaye engenantlonelo, wasinika le noveli iphazamisekileyo kunye nokuthinta inzululwazi.
Ngeli xesha, uBukowski ubeka ecaleni iinguqu zakhe Chinaski. Iinkwenkwezi ze-Pulp uNick Belane, ozibiza ngokuba "ngumcuphi ogqwesileyo eLos Angeles nase-East Hollywood."
Lo mntu uzitshabalalisayo, utywala, likhoboka lokungcakaza kwaye ngokuqinisekileyo usecicini lokulahleka, uya kubandakanyeka kumacala amatyala ekufuneka esonjululwe.
Ngenye intsasa uBheleni ufumana umnxeba ovela kuNksk. UKufa, ocela ukuba afumanise ukuba umbhali ongumFrentshi uCéline usaphila na. Ewe, umcuphi umangalisiwe, kuba uCéline wasweleka kunye neHemingway, kodwa isixa-mali esinikezelwa ngumthengi kunye neengxaki zakhe zezemali ziya kumenza amkele isabelo.
Njengokuba kungumlingo, nasemva kwembalela yomsebenzi, abathengi baqala ukwanda. Umthengi wakhe omangalisayo kwaye ongaqhelekanga ujoyine nguMnu Barton, obeka ithemba lakhe kuye ukuze afumane i-Red Sparrow.
Uluhlu lwamatyala akhe luyaqhubeka nokukhula. Emva kwezi zabelo zibini, ulandelwa nguJack Bass, ofuna ukufumanisa ukuba umfazi wakhe uyamkhohlisa na, kunye noMnumzana Groves ome njengeyonyani, uqinisekile ukuba intombi yakhe ingumphambukeli.
Kodwa awuzukujongana nezi meko zamangalisa kuphela. Iingxaki zakhe nomnini-mhlaba, ngumposi wakhe ongummelwane, ootsotsi kunye nehlabathi ngokubanzi, ziya kubenza nzima ubomi bakhe ade asombulule amatyala.
Le inoveli inikezela ngabalinganiswa abathandekayo, kwaye ngesakhiwo esimalunga ne-surreal kangangokuba akunakwenzeka ukuba ushiye. Fumana ukubamba umfundi kwiphepha lokuqala.
Njengoko sele sithethile, uBukowski, uyathandana okanye uyathandwa. Ukuba ungomnye weqela lokuqala, okanye awukabinalo uvuyo lokuyifunda, awungekhe uyiphose.
Yiba novuyo lokufunda!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Intlama, inoveli yokugqibela uBukowski wasinika yona
Molo uDiana, ndicinga ukuba ndiza kufunda iPulp, bendingazi uBukowski kodwa ndifunde uPostman kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kwaye bendisithanda isitayile sakhe esingaqhelekanga.
Imibuliso evela eMexico!
Izihloko ezi-5 zeencwadi ezithengisa kakhulu ezingabhalisiyo